Basikety – «CCCOI 2017» : samy tafakatra ny Zandary sy ny Ascut | NewsMada
Basikety – «CCCOI 2017» : samy tafakatra ny Zandary sy ny Ascut
Nisongadina ireo ekipa Malagasy, teo amin’ny dingana ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI 2017), taranja basikety. Manohy ny lalany fa tsy nisy mpanakana ny Zandary sy ny Ascut.
Efa nampoizina ny vokatra, teo amin’ny ampahefa-dalana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCCOI 2017), taranja basikety ho an’ny sokajy lehilahy. Samy tafakatra ary hiatrika ny lalao manasa-dalana avokoa, amin’ity asabotsy ity, ny Ascut Atsinanana sy ny Zandary (GNBC) Vakinankaratra.
Samy nivoaka ho mpandresy avokoa ireo ekipa malagasy roa tonta ireo, omaly. Fihaonana, notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina. Fandresena mora foana ny an’ny Zandary, raha nikatroka tamin’ny Real Club avy atsy Maorisy. Tamin’ny isa mavesatra, 104 no ho 71, ny nakan’ny GNBC ny tapakila, hanohizany ny lalany amin’ity fifaninanana ity. Tsy niady mihitsy ny fihaonana fa toy ny nanao fanazaran-tena fotsiny ny Zandary. Nitarika tamin’ny isa, hatrany am-panombohana ka hatramin’ny fiafaran’ny lalao, izy ireo. 34 no ho 21 ny isa teo amin’ny 10 mn voalohany. Teo ihany no niady sy mba afaka nanohitra an-dry Chancy sy ry Guy ary Elly sy Constant ny Maorisianina. Tsy nahafaty baolina mihitsy kosa ny Real, teo amin’ny tapa-potoana faharoa.
Tafita ihany koa ny Ascut, rehefa nanilika ny Premium Cobras avy any Seychelles. Nisaraka tamin’ny isa, 74 no ho 41, ny roa tonta. Tsy nitovy ny hery sy ny fahaizana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany. Nanantombo tamin’ny lafiny rehetra ny Ascut, notarihin-dry Fataka sy ry Did’s.
Eo amin’ny vehivavy, hifandona eo amin’ny manasa-dalana, anio, ny Fandrefiala sy ny BCM Mayotte ary adin’ny samy Malagasy kosa ny faharoa : ny fihaonan’ny MB2 All sy ny Tamifa.